सेनाले खुलायो चार हजार सैन्य पदका लागि दरखास्त, कसलाई कति कोटा ? - Naya Pageसेनाले खुलायो चार हजार सैन्य पदका लागि दरखास्त, कसलाई कति कोटा ? - Naya Page
सेनाले खुलायो चार हजार सैन्य पदका लागि दरखास्त, कसलाई कति कोटा ?
काठमाडौं । नेपाली सेनाले चार हजार सिटका लागि आवेदन आह्वान गरेको छ । जंगीअड्डा भर्ना छनोट निर्देशनालयले बिहीबार गोरखापत्र दैनिकमा सार्वजनिक सूचना जारी गरेर सैन्य पदको चार हजार सिटका लागि दरखास्त आह्वान गरेको हो ।
खुलातर्फ २ हजार ९८ सिट छ भने समावेशीतर्फ महिला, आदिवासी र जनजाति, मधेसी, दलित र पिछडिएको क्षेत्रलाई छुट्टै कोटा छ । जसअनुसार महिलामा ३५८, आदिवासी-जनजातिमा ५७२, मधेसीमा ५०५, दलितमा २७२ र पिछडिएको क्षेत्रका लागि ८५ सिट कायम गरिएको छ ।
त्यस्तै, ४ हजारमध्ये ११० सिट सैनिकका सन्ततिका लागि सुरक्षित गरिएको छ । कर्तव्य पालनको सिलसिलमा अशक्तरमृत्यु भएका नेपाली सैनिकका सन्ततिले उक्त कोटामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने छन् । कक्षा ८ उत्तीर्ण भएका तथा १८ वर्ष पूरा गरी २२ वर्ष ननाघेका (बहालवाला उम्मेदवारको हकमा २६ वर्ष ननाघेका) उम्मेदवारले १६ वैशाखभित्र दरखास्त दिनुपर्नेछ । दोब्बर दस्तुर तिरेर २३ वैशाखसम्म दरखास्त दिन सकिने व्यवस्था कायम गरिएको छ ।
सैन्य पदका लागि शारीरिक योग्यता पनि कायम छ । पुरुषको हकमा उचाइ न्यूनतम ५ फिट ३ इन्च हुनुपर्नेछ भने छाती नफुलाइ ३२ र फुलाउँदा ३४ इन्च हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, तौल कम्तीमा ५० केजी हुनुपर्नेछ । महिलाको हकमा उचाइ ५ फिट कायम गरिएको छ भने तौल न्यूनतम ४० केजी हुनुपर्ने छ ।